Akhriso: 5 ciyaaryahan oo bedeli kara Anthony Martial hadii uu ka tago Manchester United. | Gooldhalin
Akhriso: 5 ciyaaryahan oo bedeli kara Anthony Martial hadii uu ka tago Manchester United.
Iyadoo mustaqbalka Martial ee Manchester United aysan hubin maadama uu heli waaye boos joogto ah, waxaan fiirineynaa ciyaartoyda bedeli kara xiddiga reer France.
Christian Pulisic waa mid ka mid ah ciyaartoyda da’da yar ee adduunka ugu fiican. Waana 19 sano jir, Pulisic wuxuu noqday xiddiga kubada cagta ugu fiican Mareykanka.
Waxa uu durbadiiba u saftay 86 kulan Borussia Dortmund, waxaana uu weli ku jiraa da’da 20 sanno jirka. Waxa uu booska joogtada ah ka heley Dortmund xilli ciyaareedkan, ka dib markii uu ka tagay kooxda Ousmane Dembele oo u aaday Barcelona.
Thomas Lemar wuxuu ahaa xiddig ka mid ah xidigiihi Monaco u sahlay inay horyaalka ay ku guuleysteen 2016/17. Waxa uu sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray tartanka UEFA Champions League. Waxa £ 92 milyan oo ginni laga soo diiday Arsenal xagaagii lasoo dhaafay.
Inkastoo qaab ciyaareedkiisa uu xumaa xilli ciyaareedkan, waxa uu ahaa mid cajiib xilli ciyaareedkii hore.
Wuxuu dhaliyay 11 gool wuxuuna caawiyay 14 kale xilli ciyaareedkii hore, marka loo fiiriyo laba gool iyo 7 gool ayuu caawiyay xilli ciyaareedkan.
Willian waa mid ka mid ah ciyaartoyda uu ku kalsoonaa Mourinho intii uu joogey Chelsea. Qandaraaskiisa haatan ee Chelsea wuxuu dhacaya 2020, Mourinho ayaana doonaya inuu xiddiga reer Brazil u keeno Old Trafford.
14-kii kulan ee ugu dambeysay ee uu ciyaaro Chelsea, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa dhaliyay sagaal gool waxaana uu caawiyay shan kale.
Gareth Bale oo qiray inuusan ku qanacsaneyn Madrid ayaa tani waxaa ay fursad u siineysaa Manchester United inay u dhaqaaqaan xidigaan.
Waxa uu dhaliyay 12 gool waxaana uu caawiyay afar gool 19 kulan oo uu u saftay Real Madrid xilli ciyaareedkan.
Antoine Griezmann waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka. Waxa uu ku dhawaa inuu ku biiro United xagaagii lasoo dhaafay, lakiin waa uu burburay daqiiqadii ugu danbeysay sababtoo ah ganaaxii saarnaa Atletico Madrid dartiis.
Xiddiga reer France ayaa si joogta ah uga dhex muuqday horyaalka La Liga xilli ciyaareedkaan, xitaa wuxuu ku dhameystay kaalinta 3aad ee qiimeynta Ballon d’Or ee 2016.
Xiddiga Atletico Madrid ayaa dhaliyey 78 gool, waxaana uu caawiyey 22 kale afartii sano ee ugu dambeysay ee La Liga. Waxa uu sidoo kale ku hogaamiyay finalka UEFA Champions League 2014 iyo 2016.